मृत्युपछि के हुन्छ ? गौतम बुद्धको यस्तो थियो जवाफ - जान्नुहोस् बुद्दको १० महान भनाईहरु - ज्ञानविज्ञान
बुद्धलाई एक शिष्यले सोधेछन्- ‘मृत्युपछि के हुन्छ, तपाईंले आजसम्म यसबारे किन केही बताउनुभएन ?’
शिष्यको कुरा सुनेपछि मुस्कुराउँदै बुद्ध बोलेछन्- ‘पहिले मेरो एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ, त्यसपछि म बताउने छु मृत्युपछि के हुन्छ भनेर ।’
शिष्यले ‘हवस् !’ भनेपछि बुद्धले सोधेछन्- मानौं तिमी कतै जाँदैछौ । विषले भरिएको एउटा तीर तिम्रो शरीरमा आएर लाग्यो । अब भन, पहिला त्यो तीर निकालेर फाल्छौ कि यो कताबाट आयो, कसलाई निशाना बनाइएको थियो, यो यहाँबाट पार गरेको भए कसलाई लाग्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नतिर लाग्थ्यौ ?’
शिष्यले जवाफ दिए- ‘म पहिला विषले भरिएको तीर नै शरीरबाट निकालेर फाल्थें, नत्र सबै विष मेरो शरीरमा फैलिहाल्छ नि !’
गौतम बुद्दको १० महान भनाईहरु :
१) सुख चाहानेले सधैँ आफूलाई सन्तुष्ट राख्नु पर्दछ, सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो।
२) जसले आफ्नो चित्नलाई जित्न सक्दछ, उसलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन सक्दैन।
३) जागरुकताका साथै संयक जानकारी युक्त पनि हुनुपर्दछ, अगाडि बढ्दै र पछाडि हट्दै स्वयलाई संयममा राख्नुपर्दछ।
४) घर आपसी सदभावना र प्रेम, बृद्द श्रद्दा र किशोरलाई सम्मान भएको ठाउँ हुनुपर्दछ। परिवारमा सदस्यहरुमा कुनै स्वार्थ हुनुहुदैन।
५) मानसिक दु:ख बराबर अर्को दु:खदायी घाउ हुदैन।
६) घृणा मनुष्यका लागि हानिकारक छ,आफूभित्र घृणालाई स्थान दिने मानिस आफ्नो नियन्त्रण छोड्छ।
७) एकाग्र भएको चित्तले नै पूर्ण स्थिरतालाई प्राप्त गर्दछ, कुशल चित्तको एकाग्रता नै समाधि हो।
८) जागरुकताको अभ्यास गर्नुपर्छ, जागरुकतायुक्त हुनुपर्छ।
९अन्यबात होइन कर्मबाट मानिस शुद्र वा व्रामहान जातिका हुन्छन।
१०) जसले तृष्णालाई बढाउँदछ, जसले उपाधिलाई बधाउँद्छ, जसले उपाधिलाई बढाउँदछ, उसले दु:खलाई बढाउँदछ।
अब कुरा आउँछ हाम्रो मृत्युपछि के हुन्छ त ? हाम्रो मृत्यु हुँदा हाम्रो शरीरले ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्दैन (किनभने, ऊर्जा उत्पादनको लागि हाम्रो शरीरले खाना खाएको हुँदैन, खानाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नको लागि खानासँग प्रतिक्रिया गर्नको लागि अक्सिजन शरीरभित्र छिरेको हुँदैन र अक्सिजन हरेक कोष–कोषमा पुर्याउनको लागि रक्तसंचार क्रियाशील हुँदैन) ।
त्यसैले शरीरको तापक्रम घट्न थाल्छ । कतिसम्म घट्छ त ? वायुमण्डलको तापक्रम जति छ, त्यतिसम्म । यदि तपाईंले मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको हात छुनुभयो भने तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया हुन्छ, ‘शरीर त चिसो छ !’ होइन ! शरीर चिसो हुँदैन ! शरीरको तापक्रम त वायुमण्डलको तापक्रम जति छ, त्यति नै हुन्छ । तर, तपाईंको आफ्नो हात त ९८.६ डिग्री फरेन्हाइटसम्म तातो छ नि त !
मृत शरीरमा ऊर्जा उत्पादन हुने कार्य भइरहेको हुँदैन । शरीरका हरेक अणुहरुमा ऊर्जा सञ्चित भएर बसेको हुन्छ । मृत शरीरलाई जलाइयो भने उक्त सञ्चित ऊर्जा तापमा परिणत हुन्छ र उक्त तापले हावालाई तताउने काम गर्छ । सो तातो हावा अन्तरिक्षमा जान्छ । तर, मेरो मृत्युपछि म चाहन्छु कि मेरो मृत शरीरलाई गाडियोस् ।
मेरो शरीरलाई गाडियो भने मेरो शरीरका अणुहरुले जीवनभर सञ्चित गरेको ऊर्जा सूक्ष्म किटाणुहरुले प्रयोग गर्छन्; ब्याक्टेरिया तथा अन्य किटाणुहरुले मेरो मृत शरीरको ऊर्जा आफ्नो जीविका चलाउन प्रयोग गर्छन् । त्यसैले मेरो शरीर पृथ्वीकै जीवजन्तुमा फर्कन्छ । र, जीवनको एक चक्र समाप्त हुन्छ । मलाई थाहा छ कि त्यस्तो हुनेवाला छ, किनकि मेरो शरीरमा सञ्चित ऊर्जा कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामी मापन गर्न सक्छौँ ।
Don't Miss it घामको राप बढ्दैछ, यस्ताे गर्मीमा कुल लुक्स राख्न यस्तो छ काइदा
Up Next आफ्नाे शरीरको भाषा बुझ्नुहोस् ! रोग लाग्दैन
सामान्‍यतया मानिसहरु आफ्नो दैनिकी अनदेखा गरिरहेका हुन्छन् जसले उसको जीवन शैली नै खतरामा पर्न जान्छ। हामी हरेक दिन निदाउँछौं। बिछ्यौनामा…